खेम सेन्चुरीको ‘म रोएको सुन्छ्यौ हौला र’? सार्वजनिक (भिडियोसहित)
नेपाल लाइभ शनिबार, चैत १, २०७६, १०:१०
काठमाडौं- गायक खेम सेन्चुरीकाे स्वरमा रहेकाे लोक गीत 'म रोएको सुन्छ्यौ हौला र'? सार्वजनिक भएको छ।
गणेश केसीको शब्द तथा स्वयं गायक सेन्चुरीकै सङ्गीत रहेको उक्त गीतमा जीवनसाथी गुमाएपछिको दुःखद कथालाई समेटिएको छ। श्रीमान्‌-श्रीमतीमात्रै रहेकाे परिवारमा सन्तानको आगमन हुँदैछ भन्ने खबरपछि छाएको खुसीमा बाँचेका जोडी गीतमा बिछोडिएका छन्।
सन्तानको आगमनको सपना बुनेर बसेकालाई एकाएक श्रीमती र संसार देख्न नपाउँदैको सन्तानले छोडेर जाँदा एक्लो हुनुकाे पीडा समेटिएकाे गीतमा ईश्वरबाबु र जुना गुरुङले अभिनय गरेका छन्। गीतमा श्रीमतीको मृत्युपछि भुल्न नसकेर उनकै यादमा पागल बनेको दृश्य निकै पीडादयी छ।
गीतलाई कपिल लामाले निर्देशन गरेका छन् भने संगीत संयोजन बिनोद बाजुरालीको रहेको छ। गीत गणेश केसीको अफिसियल युट्युवमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
तीजमा बहिनी ल्याउन गायक पशुपति शर्मालाई 'कोरोनाले रोक्यो झ्याप्पै'! [भिडियोसहित] लकडाउनका कारणमा घरम बस्दाबस्दै दाइको पेट बढेको दृश्य गीतमा देखाइएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्न नदिनका लागि अपनाइएका सामाजिक दूरीका नियमल... आइतबार, असार २१, २०७७
गायक सोनु निगमको आरोप- मुम्बईको म्युजिक माफियाको कब्जामा भारतीय गायक सोनु निगमले बलिउड म्युजिक बजार माफियाको हातमा पुगिसकेको प्रतिक्रिया दिएपछि अहिले यो बहसको विषय बनेको छ। अभिनेता सुशान्त... आइतबार, असार १४, २०७७
जातीय विभेदविरुद्ध सापकोटाले ल्याए ‘जात’ कलाकार तथा सञ्चारकर्मी चिरञ्जीवी सापकोटाले ‘जात’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन्। रुकुम घटनापछि मुलुकमा जातीय विभेदको विषय उत्कर्षमा प... सोमबार, असार ८, २०७७